Bit By Bit - Mass ပူးပေါင်း - 5.6 နိဂုံး
mass ပူးပေါင်းမီကဖြေရှင်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြကြောင်းသိပ္ပံနည်းကျပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးဖို့သုတေသီများကို enable ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဒီဂျစ်တယ်ခေတ်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအစားကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်သုတေသနလုပ်ငန်းလက်ထောက်၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်နှင့်အတူပူးပေါင်းထက်, အတိတ်ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, ကျနော်တို့ယခုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူလောကရှိလူတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းနိုင်ပါ။ ဤအခနျးပြပွဲအတွက်ဥပမာအဖြစ်, အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. ဤအသစ်သောပုံစံများပြီးသားအရေးကြီးသောပြဿနာများကိုအပေါ်စစ်မှန်သောတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေသိပ္ပံပညာရှင်များ enabled ကြပြီ။ လူမှုရေးသိပ္ပံတွင်ဤနည်းစနစ်၏လျှောက်လွှာတစ်ပွင့်လင်းမေးခွန်းဖြစ်နေဆဲ, ဒါပေမယ့်ငါအကောင်းမြင်ဖြစ်၏။
လူမှုရေးသုတေသန၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ငါကအုပ်စုသုံးစုသို့အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. စီမံကိန်းများဝေအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ထင်:
ပွင့်လင်းခေါ်ဆိုခစီမံကိန်းများတွင်, သုတေသီများ, ဖြေရှင်းချက်စစ်ဆေးများစွာသောလူထံမှဖြေရှင်းချက်ကိုမြှူဆွယ်တောင်းခံ, အဲဒီနောက်အကောင်းဆုံးကောက်ယူရန်လွယ်ကူသောနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိုး။
ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းစီမံကိန်းများတွင်သုတေသီများကကမ္ဘာ၏အသစ်တိုင်းတာမှုများအထောက်အကူပြုရန်သင်တန်းသားများကို enable ။
လူမှုရေးသုတေသနများတိုးတက်အပြင်, အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. စီမံကိန်းများလည်းအလားအလာဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးသောကြပြီ။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေဟာအကြီးစားစီမံကိန်းများကိုစည်းရုံးနိုင်ပြီးသူတို့အထောက်အကူပြုနိုင်သူနှစ်ဦးစလုံးကိုထပ်တိုး။ ဝီကီ​​ပီးဒီးယားကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်သောထင်သောအရာကိုပြောင်းလဲသွားသကဲ့သို့အနာဂတ်အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. စီမံကိန်းများကျွန်တော်တို့သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်ဖြစ်နိုင်ထင်သောအရာကိုကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။